IRAN OO GANTAALO KU GARAACDAY SALDHIYADA MARAYKANKA EE GUDAHA DALKA CIRAAQ | Bosaso Media
Wasaaradda Difaaca Mareykanka, ayaa xaqiijisay in Iran ay ilaa 10 gantaal xalay ku garaacday, laba saldhig oo uu millatariga Mareykanka ku leeyahay gudaha waddanka Ciraaq.
Waaxda Gaashaandhiga Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon-ka, ayaa sheegtay in gantaallada baalistiga lagu garaacay saldhigyada al-Assad iyo Irbil ee ciidamada cirka Mareykanka. Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in saldhig saddexaad oo lagu magacaabo Camp Taji oo 27 km u jira magaalada Baghdad isna la duqeeyay.
Dhinaca kale, bayaan kasoo baxay Ciidamada Ilaalada kacaanka Iran, ayaa lagu sheegay in uu si guul ah ku dhamaaday weerar ay sheegeen in ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Ciraq.
Waxa kale oo bayaanka lagu sheegay, in duqeyntaasi loogu aargudayay jeneraal Qassem Soleimani, oo ay todobaadki hore Mareykanka ku dileen duqeyn cirka ah, xilli uu marayay meel u dhaw garoonka diyaaradaha ee Baghdad.
Labada dhinac midkoodna weli kama hadal, khasaaraha ka dhashay gantaalaha, ay Iran ku garaacday saldhigyada Maraykanka ee gudaha dalka Ciraaq, balse Pentagon-ka ayaa sheegaya in ay weli qiimaynayaan haddii khasaare jiro.